Jereo izay azonao jerena ao amin'ny Leon fjords | Vaovao momba ny dia
ny Leonese Fjords dia faritra iray any Castilla y León izay lasa toerana malaza be. Fantatra amin'ny anarana hoe fjords izy ireo na dia reservoir tsotra aza any Riaño izay mitovy amin'ny fjords mahazatra sy ireo sary hitantsika momba azy ireo, noho izany dia nantsoina hoe iray ihany izy ireo ary nanjary tontolo iray sarobidy tokoa ny mpitsidika satria mahasarika fiheverana.
ireo Leonese Fjords dia ao amin'ny tendrombohitra Cantabrian mamorona vatolampy vatosokay goavam-be. Ampahany izay an'ny zaridaina Picos de Europa izy io, noho izany dia tsy isalasalana fa toerana tena mahaliana izy io hamita ny fitsidihana an'ity habaka voajanahary ity.
1 Ahoana no nahatongavantsika tany amin'ny Leonese Fjords
2 Tantaran'ny fjords
3 Fonenana ao Riaño
4 Inona no ho hita ao Riaño
Ahoana no nahatongavantsika tany amin'ny Leonese Fjords
Ireto fjords Leon tsara tarehy ireto dia toerana iray mahaliana tokoa izay azo tratrarina avy ao amin'ny tanànan'i León. Azo tratrarina amin'ny alàlan'ny làlambe N-625 sy ny lalana N-621. Misy maromaro avy amin'ny Picos de Europa lalana izay tonga mivantana amin'ity toerana ity avy any Cangas de Onís ary avy any Potes, manao azy ho faritra tena mora misy fidirana mora avy amin'ny toerana fizahan-tany isan-karazany ao. Amin'izany fomba izany dia fitsidihana tena ilaina izay azontsika atao haingana ao anatin'ny iray andro ny mahita ity toerana ity ary mijanona mangina indray maraina na iray tolakandro. Ny tendrombohitra Riaño dia miorina ao avaratry ny avaratry ny fiarahamonina. Izy io dia ao amin'ny Picos de Europa ary koa ny Riaño ary Mampodre Mountain Regional Park.
Ity toerana izay mpizahatany ity ankehitriny ary toa mahavariana sy tsara tarehy dia voatanisa ho iray amin'ireo loza ara-tontolo iainana any Espana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ity faritra misy farihy ity dia tratra tamin'ny fihetsiky ny olona noho ny fitehirizan-tany namboarin'ilay tena tontolo izay mbola tsy noforonina tamin'ny fomba voajanahary. Tao ambanin'ny rano hitantsika, tanàna taloha sivy no tondra-drano tamin'ny taona 87, rehefa notokanana ilay tohodrano. Trano vaventy marobe no nafindra mba tsy ho very izy ireo, ary koa ny tranom-bahiny tranainy roa amin'ny fomba Asturleonian. Nosokafana io taorian'ny fihetsiketsehana maro ary tamin'ny andro farany tamin'ny taona satria ny ampitson'io dia nisy ny fitsipi-pifehezana eoropeanina izay nandrara ity karazana tetikasa ity izay nisy fiatraikany teo amin'ny tontolo iainana. Notontosaina ihany ny tetik'asa ary nonina tao Nuevo Riaño ireo voaroaka.
Fonenana ao Riaño
Ao an-tanànan'i Riaño dia misy trano hipetrahana raha toa ka ny hijanona ao amin'ilay faritra no tadiavinay hankafy ny habaka voajanahary amin'ny filaminana. Misy a filasiana manome vidiny lafo ary koa bungalow. Etsy ankilany, ao an-tanànan'i Riaño dia misy trano fonenana toy ny trano, trano ambanivohitra na hotely.
Inona no ho hita ao Riaño
Eto amin'ity tanàna ity isika dia afaka mahita zavatra mahaliana sasany toy ny tsangambato izay nafindra tanteraka avy amin'ireo tanàna taloha izay tao anaty rano. ny Fiangonan'ny vadin'ny rosary Any akaikin'ny tetezana eo amin'ny tampon-kavoana kely no misy azy ary manome sary mahafinaritra sy sary mahafinaritra. Izy io dia tempolin'i Romanesque iray nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay nifindra vato hatrany amin'io faritra io. Ao anaty fiangonana dia azo atao ny mahita sary hosodoko Baroque, Romanesque ary Gothic. Maimaimpoana ny fidirana ary azo atao ny mahita mpitari-dalana ary koa fanazavana vitsivitsy momba ny tantaran'ny tempoly.
Raha any am-piangonana ianao dia manana ny teboka mety indrindra hanombohana ny dian'ny fahatsiarovana. Ity dia ity dia lalana mpandeha an-tongotra izay manodidina ny faritry ny fitahirizana mba hankafizanao ny fahitana mahafinaritra. Amin'ity dia ity dia misy dabilio maromaro misy fomba fijery tsy mampino haka sary tsara. Ny banky apetraka amin'ny toerana stratejika dia malaza ankehitriny ary izany no antony ahitantsika azy ireo amin'ny faritra izay ahitana ny fomba fijery tsara indrindra.
El Museum Ethnographic of Riaño no toerana anehoana ny vakoky ny kolontsaina malaza avy amin'ny Leonese Mountain of Riaño. Sombin-jatony an-jatony no aseho ao amin'ity tranombakoka ity, maro no natolotry ny mpiara-monina mba hamoronana teboka mahaliana iray hanehoana ny kolontsainy amin'ny mpitsidika. Amin'izao fotoana izao dia azonao atao ihany koa ny mahita tontolo voaova toy ny House of Smoke na forge nentim-paharazana. Amin'ny kianja mitovy toerana misy ny tranombakoka ihany koa ianao dia afaka mahita zavatra hafa toy ny Leon hórreo mahazatra, zanak'omby amin'ny omby kiraro ary tranon'ny mpiandry ondry.
Amin'ity tontolon'ny Leon fjords ity dia azo atao koa ny mankafy fomba fijery isan-karazany sy lalan-tongotra. Ny fanatanterahana ireo zotra samihafa ireo dia hahatratra ireo fomba fijery marobe miaraka amin'ny fomba fijery mahafinaritra. Ny Mirador de las Hazas sy Valcayo dia faritra izay tsy azon'ny tongotra an-tongotra ihany, satria lalana maloto ireny. Làlana lavorary izy io hahafahanao mankafy miaraka amin'ny fianakaviana ary miaraka amin'ny biby aza, voahodidin'ny natiora ary manana fomba fijery mahafinaritra momba ny fjords sy ny tendrombohitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Leonese Fjords